Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि काठमाडौं रातारात झकिझकाउ – Emountain TV
चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि काठमाडौं रातारात झकिझकाउ
काठमाडौं, २३ असोज । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तालिकासँगै यतिबेला राजधानी काठमाडौंका सडक साँच्चिकै सफा देखिंदैछन् । पिचमाथि पिच र त्यस माथि लगाइएका सेता रंगले सडक सांच्चिकै सफा र सुन्दर देखिन्छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि गौशाला जाने सडक र कोटेश्वर तिनकुने हुँदै बानेश्वर, बबरमहल, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी हुँदै सोल्टी होटल जाने सडक साँच्चिकै सफाचट बनाइएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने तालिकाले एकाएक राजधानी काठमाडौं रातारात परिवर्तन भइरहेको छ । अघिल्ला दिनसम्म टुटेफुटेका धुलाम्य मुख्य सडकमा रातारात पिच गरिएको छ । कोटेश्वरको तिनकुनेमा सुन्दर बगैंचा बनाइएको छ ।
राजधानी अहिले चिटिक्क देखिनुमा विभिन्न स्थानमा राखिएका रंगिन स्वागतद्धारहरु पनि रहेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागतमा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिका फोटो सहितका स्वागतद्धारले पनि राजधानीलाई थप चिटिक्क पारेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, सडकका पोलपोल र चोकचोकमा दुवै देशकै राष्ट्रपतिका रंगिन फोटोहरु झुण्डाइएका छन् । यो क्रम अझै जारी रहेको छ ।
सडक किनारमा अझै कतै फुल रोपिएका छन् भने कतै रोपिंदैछन् । सडक सफा गर्न कामदार पनि खटिरहेकै छन् । त्यति मात्र होइन, सडकमाथि दिनदिनै ब्रुमर लगाई सफा गर्ने काम भइरहेको छ ।
दशैंको रौनक अझै नसकिएकाले राजधानीका सडकमा अहिले सवारी साधन निकै पातलो चलेको देखिन्छ । जसले सडक र सडक किनारामा काम गर्न सजिलो पनि भइरहेको छ ।
पोलपोलमा राष्ट्रपतिको फोटो झुण्डाइएको त छ नै । चोकचोकका रंगिन पोलहरुमा फहराइएका नेपाल र चीनका रंगिन राष्ट्रिय झण्डाहरुले काठमाडौंलाई थप उज्यालो बनाइरहेको छ । अहिले बनाइएको जस्तै सडक राजधानीमा सधैं भइदिइए कस्तो हुन्थ्यो होला ? आम नागरिकको मनमा अहिले यही कुरा खेलिरहेको छ ।
यतिमात्र होइन अहिले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था पनि अत्यान्तै कडा पारिएको छ । सडकमा नेपाली सेनाले गस्ती गर्न थालेको छ । सि हिड्ने पुलमा सुरक्षाकर्मीले पहरा दिएका छन् । प्रत्येक पुलमा नेपाल प्रहरी खटिएका छन् ।